बधाई ! नेपाली दिवेश पुगे अमेरिकन आइडलको टप ७ मा – Articles Nepal
बधाई ! नेपाली दिवेश पुगे अमेरिकन आइडलको टप ७ मा
Articles Nepal May 11, 2020 0
काठमाडौ : यतिबेला सिंगाे विश्व नै काेराेना भाइरसकाे कहरमा अल्झिरहेकाे छ । सबैतिर डर, निरासा र बेखुसि छाइरहेकाे छ । यसैबिचमा संसारभर छरिएर रहेका नेपालीमाझ खुसि दिलाउने काम गरेका छन नेपाल दिवस पाेखरेलले । ‘अमेरिकन आइडल’को १८ औं संस्करणमा सहभागी नेपाली युवा दिवेश पोखरेल उत्कृष्ट ७ मा पुग्न सफल भएका छन् । अर्थर गन भनेर पनि चिनिने दिवस पाेखरेल विश्वकै ठूलो मानिएको गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा विभिन्न चारणहरु पार गर्दै टप ७ मा पुग्न सफल भएका हुन ।
नेपालमा जन्मिएर यतै हुर्किएका दिवस केहि बर्ष अगाडि अमेरिकागएका थिए । अहिले नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर नै दिवेशकाे चर्चा चुलिएकाे छ । अडिसनबाटै सबैकाे मन जित्न सफल उजलाइ संसारभरबाट नेपालीहरूले धेरै समर्थन गरिरहेका छन । अर्थर गन अमेरिकन आइडलमा छाएसंगै संसारभरका नेपालीले गर्व महशुस रिरहेका छन । २१ वर्षीय दिवेश कार्यक्रममा ‘आर्थर गन’को नामबाट प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन्।
यता काठमाडौँमा भने पोखरेलका अाफन्त रअन्य समर्थकले भाेटकाे अपिल गरेका छन । र प्रतियोगितामा पोखरेललाई विजयी बनाउन उनको टोलबासी समेत प्रचारमा जुटेका थिए । शनिबार पोखरेललाई भोट गर्न अपिल गर्दै प्लेकार्ड बोकेर उनीहरु कलंकीको सडकमा ओर्लिएका थिए ।
Previous Post: नायिका सुहाना थापाकाे जन्मदिन, ‘Happy Birthday’
Next Post: काे*राेना संं*क्रमणबाट कसैको मृ*त्यु नहाेस भन्ने चाहना अ*सफल भएकाे प्रधानमन्त्री भनाइ